Coin Counter & Sorter Machines | Yemahara Yekutumira Coin Counter & Sorter - CashCounterMachines.com
musha Coin Counters uye Sorters
Coin Counters uye Sorters
Mabhizinesi mazhinji akaita sekuwacha nekuwacha masevhisi, matumba ekufonera uye mari dzerupo dzinogamuchira yakawanda yemari yavo mukuchinja kana semari. Nickels, dimes, quarters uye pennies ndizvo zvinovakisa zvebhizinesi. Zviri nyore kurasikirwa nekuverenga kwese mari idzo kana kusazvidavirira nezvese shanduko yawakagamuchira. Iyo coin sorter uye counter inogona kununura iwe kubva kune isingaperi maitiro ekuita shuwa kuti hapana kukanganisa kunoitwa uye kurasikirwa kunoitwa nebhizinesi rako kunoderedzwa. Izvo zvakare zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kuverenga iyo shanduko uye dhipoziti mumabhangi ane akatsvinda stacks akagadzirwa zvinoenderana nemari masangano. Nei zvino kaunda yesimbi isingave iyo yekupedzisira sarudzo yebhizinesi rako?
Kolibri KCS-2000 Coin Counter, Sorter uye Roll Wrapper
Zvimiro Zvinogara uye zvakarurama iyo KCS-2000 kuverenga, kuronga, uye mabhechi, makoini ako kuita mapepper akafanogadzirwa kana kuaronga mumabhini. Ne hopper ca...
Cassida C300 Coin Counter uye Sorter
Mhinduro Yakazara kuKuverenga Kwemari, Kuronga uye Kupeta Iyo Cassida C300 ndiyo inotungamira yekutengesa giredhi remari kaunda, kuronga uye kuputira. Ne...
KLOPP Model CECR1 Electric Counter, Wrapper, Bagger uye Crimper
Iyo KLOPP Model CECR inosanganisa maficha eModel CE Coin Counter uye iyo Model CR Crimper. Inoverenga, inoputira uye mabhegi emari uye tokeni, imwe ...
KLOPP Model CECR4 Electric Counter, Wrapper, Bagger uye Crimper
Yakaomarara, yakabatana, uye inotakurika, iyo CS-10S inosanganisa zvinhu zvinonyanya kudiwa mukombi yesimbi. Iyi ndeimwe yediki uye inokurumidza compact coi ...